Matagi: ivars chowder | Martech Zone
Maki: ivars chowder
Zvinoenderana neYouTube, maawa makumi maviri nemaviri evhidhiyo anoiswa paminiti yega yega! Vashandisi veTwitter mazana mana emamiriyoni pazuva. Munyika izere neruzha, zvakaoma kuti chigadzirwa, webhusaiti, kana sevhisi inzwike. Izvo zvinotonyanya kuoma kana pasina chinhu chakasarudzika zvechokwadi pamusoro pechinhu chiri kutengeswa. Mazuva ese, vatengesi vanosangana nedambudziko rekukwira pamusoro peruzha. Mukutarisira kwekusimudzira kwekusika, ndinotendeukira kuna 72
Pandakanga ndiri pasi muHouston, mumwe wevatauri akacherekedza mashandisiro achaita kambani imwe mari pane yavo yekutandarira kupfuura yavachaita pakuvapo kwavo online. Hapana munhu anobvunza anogadzira mibhedha kuti chii chinodzoserwa mukudyara chiri pasofa reganda rakanaka kune yekuchengetedza - asi munhu wese anotema uye chisisi kure nemutengo wewebhu nyowani. Makambani akawandisa anofuratira zano racho zvachose - akanyanyobatikana neazvino